मूल्याङ्कन - पीसी मा राम्रो Shooters। कम्प्युटर गेम
कम्प्युटर गेम को क्षेत्र एक विशाल विविधता आनन्द लिई गरिएको छ मा - निरन्तर प्रमुख स्टुडियो, संसारभरि साथै तेस्रो-पक्ष विकासकर्ताहरूले र सानो कम बजेट कम्पनीहरु देखि ज्ञात दुवै देखि खेल को एक ठूलो संख्या उत्पादन गर्छ। तसर्थ, खेलाडीहरूलाई सधैं छनौट प्रशस्त छन्। तर अक्सर छ "अनाज को chaff देखि" को तथाकथित अलग एक समस्या - खेल को आगमन र खेल विकास परियोजनाहरूको एक ठूलो संख्यामा व्यापक पहुँच उच्चतम गुणस्तर हुनुको टाढा छन्। गल्ती बनाउन र कसरी गर्न मात्र ती खेल ध्यान दिनुपर्छ भनेर चयन गर्न? तपाईंलाई मनपर्ने भने राम्रो शूटर पीसी मा, त्यसपछि यो लेख तपाईं को लागि हो। सबै विधाहरू एउटा लेख समेटिएका छन् त्यसैले अब ध्यान मात्र जहाँ तपाईं चलाउन र गोली छ ती खेल केन्द्रित हुनेछ, असम्भव छ। त्यहाँ पहिलो र तेस्रो व्यक्ति Shooters छन् - ज्यादातर किनभने आफ्नो फिर्ता को - एक मामला मा तपाईं आफ्नो चरित्र आँखा विश्व हेर्नुहोस्, र अर्को मा। र वास्तवमा, र अर्को मामला मा, तपाईं अब छलफल गरिने वास्तविक रत्न, पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईं पीसी मा राम्रो Shooters चाहनुहुन्छ भने - तपाईं ठीक ठाउँमा आउन गर्नुभएको छ।
राम्रो Shooters पीसी मा फरक हुन सक्छ - तिनीहरूले धेरै नजिकबाट वास्तविकता सदृश हुन सक्छ, र अविश्वसनीय शानदार हुन सक्छ, तिनीहरूले एक विस्तृत समय तालिका हुन सक्छ वा शैली हास्य अन्तर्गत सम्मिलित गर्न सकिन्छ। यो पहिलो उम्मेदवार मध्ये एक छ - तपाईं यसलाई रुचि हो यदि यथार्थवाद, को ARMA छ। यो खेल जहाँ एक गम्भीर सैन्य संघर्ष प्रकट देश को काल्पनिक क्षेत्रमा ठाउँ लिन्छ। एक सरल शूटिंग साथै, तपाईंले साक्षर रणनीतिकार हुन र राम्रो परियोजना को जटिलता को स्तर रूपमा धेरै उच्च छ छाँटकाँट गर्न आवश्यक छ। के तपाईं साँच्चै प्रभावकारी लड राख्न अघि गम्भीर कठिन काम गर्न छ। यो सबै सँगै यो विधा को सबै भन्दा राम्रो खेल गर्न परियोजना ठान्नुहुन्छ। तर तपाईं अरू के पीसी मा राम्रो Shooters सम्झना गर्न सक्छौं?
तपाईं पीसी मा अनलाइन Shooters आवश्यक छ भने, त्यसपछि यसलाई यहाँ तिनीहरू बारे जान्छ कि सम्झना गर्नुपर्छ, त्यसैले तपाईं कहाँ खेल मात्र बहु लागि हो यो स्तर काउन्टर स्ट्राइक, Warface र जस्तै, खोजी गर्न सक्दैन। उदाहरणका लागि, ARMA मा, तपाईं नेटवर्कमा प्ले गर्न सक्नुहुन्छ, तर परियोजना खेल आधार छ एक प्रभावशाली कथा अभियान, छ। सुदूर रो लागि, यहाँ जोड पनि अघिल्लो मामला मा भन्दा बढी कथा छ। समय को लागि ग्राफिक्स घटक बस पनि एक परियोजना पुग्न गर्दैन शीर्ष, थियो - साथै, यो खेलाडीहरूलाई शुद्ध सिम्युलेटर शूटिंग भन्दा शूटर, साथै केही सुन्दर प्रस्ताव किनभने श्रृंखला को पहिलो भाग क्रान्तिकारी थियो छ। वर्षौंदेखि यो सबै बस, सिद्ध गर्नुपर्छ श्रृंखला को चौथो भाग आए, र उनले आफ्नो स्थिति दिंदैन अप। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, पीसी मा मात्र होइन अनलाइन Shooters लोकप्रिय हुन सक्छ।
हामी पीसी मा सबै भन्दा राम्रो Shooters विचार भने, सूची यो साँचो कृति वास्तवमा भएको छ रूपमा अप, BioShock को ट्रिलजी भर्न निश्चित हुनुपर्छ। खेल, अविश्वसनीय वायुमण्डलीय छ संसार र सुन्दर कथा कहानी छ, तर थप त्यो आरपीजी तत्व उपयुक्त शूटिंग, को शूटर को इतिहास मा पहिलो थियो भन्ने तथ्यलाई द्वारा बाँकी देखि बाहिर खडा गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईंलाई थप प्रभावकारी विरोधीहरूले लड्न अनुमति क्षमता को एक किसिम मा आफ्नो चरित्र विकास गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्य मा ट्रिलजी अन्तिम प्रसङ्ग इतिहास मा सबै भन्दा राम्रो को रूपमा पहिचान गरिएको छ। यो असम्भव छ देखि पीसी मा अन्य Shooters तुलना गर्न। यो विधा को सबै भन्दा राम्रो खेल को सूची, पाठ्यक्रम, त्यहाँ अन्त गर्दैन।
निस्सन्देह, यो शूटिंग खेल बारे आउँदा, तपाईं सम्झनुपर्छ र सीआईएस देशहरुमा विकसित गरिएको छ जो ती परियोजनाहरू, र थप अरूलाई भन्दा यूक्रेनियन सफल छन्। उदाहरणका लागि, "मेट्रो 2033" - विश्वव्यापी मान्यता छ, जो गरिएको र एक अविश्वसनीय लोकप्रियता छ राष्ट्रिय परियोजनाहरूको एक,। मात्र कहिले काँही तिनीहरू mutants संग लड्न छ जहाँ सतह, बाहिर रही, तिनीहरूले अब बाँच्न कहाँ - यहाँ postapokaliptichnom मात्र मेट्रो मा प्रकोप को समयमा परेका ती मानिसहरूले बाँचे कुन संसार बताउँछ। खेल हालै दुवै भागहरु अद्यावधिक ग्राफिक डिजाइन र अन्य प्रगतिशील सुधार विकास गर्न खेल विकासकर्ताले अमीर लागि त आवश्यक छ कि संग पुन: जारी गरियो भनेर सफल भएको थियो। Shooters प्रमुख निवेश आवश्यक, तर कहिलेकाहीं निर्माताहरू यस्तो दावी खण्डन गर्न व्यवस्थापन गर्नुहोस्।
राम्रो शूटर आवश्यक unearthly सौन्दर्य, फेरि यूक्रेनियन द्वारा विकसित गरिएको छ जो Stalker, एक ट्रिलजी चमक गर्छ के छैन को एक उत्कृष्ट उदाहरण। फेरि यहाँ हामी, postapokalipsise बारेमा कुरा गर्दै अलिकति फरक किसिमको - मान्छे विभिन्न factions विभाजित, एक सतह मा हो, र तपाईं एक प्रकोप उत्पन्न गरिएका सबै राक्षस संग, अन्य संग युद्ध गर्न साथै तिनीहरूलाई को एक सामेल गर्न आवश्यक हुनेछ। त्यहाँ नवीनतम ग्राफिक्स समर्थन को अभाव को लागि पूर्ण क्षतिपूर्ति गर्न सक्ने केहि त्यहाँ, अविश्वसनीय कहानी एक विशाल संसार, आफ्नो वर्ण संग वर्ण भरिएको छ जो, सामान्य मा छ। त्यसैले जब तपाईं सबै शीर्ष Shooters देखो, "Stalker" त्यहाँ प्रत्याभूति गरिनेछ। फेरि, यो हुनत यो सीआईएस विकास थियो, र यसको उन्नत खेल विकासका लागि धेरै छैन ज्ञात छ, तर स्वीकार र सराहना गरिएको छ दुनिया भर एक खेल हो। यो छ त, कुनै पनि मामला मा, हाम्रो समय को शीर्ष Shooters छ।
पीसी मा सैन्य Shooters 1 व्यक्ति विचार, को Battlefield ध्यान पक्का हुन - «युद्ध" बस भव्य छ, र आज लामो समय को लागि यति रहनेछ। यो दोस्रो विश्व युद्ध मा एक बहु शूटर रूपमा थाले, तर समय अप लडाई रोबोट मा Nanosuit विरुद्ध युद्ध एकल मोड, र धेरै अन्य विषयहरू, owning, विकसित छ। स्वाभाविक, खेल को लागि एक बहु मोड अझै पनि प्रधान, दुनिया भर संग उनको प्रेम लागि हो। निस्सन्देह, केही पीसी मा नि: शुल्क Shooters चयन, तर यो पटक भुक्तानी गर्न, र त्यसपछि सबै सुविधाहरू प्रयोग गर्न र अधिकतम खुशी प्राप्त राम्रो अझै पनि छ।
तपाईं याद हुन सक्छ, यो सूचीमा आएका छन् कि खेल को सबै भन्दा पहिलो व्यक्ति शूटर हो, त्यसैले यो प्रवृत्ति ठीक गर्नुपर्छ - र TOMB RAIDER सबै लारा क्र ाफ्ट श्रृंखला यसलाई राम्रो सक्षम बनाउन। यो चरित्र थाह सबै - यो भिडियो खेल मा सबै भन्दा प्रसिद्ध महिला चरित्र छ, र त्यो छोटो तंग छोटकरीमा मा एक सेक्सी TOMB RAIDER रूपमा थाले, र यो फारम मा लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ। तर हालसालै, श्रृंखला फेरि सुरु भएको थियो, तर त्यो एक जवान विद्यार्थी र पुरातत्वविद् हुँदा लारा, विगतमा मा पठाइएको थियो। यो मूल लारा क्र ाफ्ट भन्दा धेरै लोकप्रिय जस्तो थियो? तर, एक नयाँ परियोजना पनि अधिक प्रभावशाली थियो।
श्रृंखला आधा जीवन - अवैध प्रयोग संलग्न थियो भौतिक गर्डन फ्रीमैन, को कथा भन्छ कि अनन्त कृति हो, र उहाँले यो प्रयोग द्वारा उत्पन्न राक्षस संग मात्र लड्न थियो, तर पनि आधार पठाइयो गर्ने सेना, संग एकमात्र बाचेको व्यक्ति साक्षी त्रुटिहरू रूपमा यसलाई हटाउन। गर्डन को दोस्रो भाग उहाँले लड्न हुनेछ एलेक्स र अन्य साझेदार मार्फत यो एउटा तानाशाही सरकार, स्थापित जहाँ भविष्यमा, हस्तान्तरण। सबै खेलाडीहरूलाई वर्ष पहिले नै खेलको तेस्रो भाग अगाडी देख, तर लामो यो पनि बादल मडारिरहेको देखिँदैन रूपमा।
एक धनी खुला दुनिया पहिलो थियो जो अर्को तेस्रो व्यक्ति शूटर। निस्सन्देह, हामी भागहरु बारेमा, तेस्रो देखि, पहिलो र दोस्रो शीर्ष दृश्य संग आर्केड खेल थिए कुरा गर्दै छन्। तेस्रो खेलमा एउटा क्रान्तिमा गरे, र यो देखि सुरु, सबै नयाँ भागहरु पनि राम्रो थियो - उनि लगभग सधैं सबै चार्ट मा प्रथम स्थान लिए, र सबै भन्दा हाल पनि 2015 भन्दा राम्रो को एक भएको छ जो को पाँचौं आए।
र, को पाठ्यक्रम, हामी विधा शूटर को titans बारेमा भूल हुँदैन - कल अफ ड्युटी। सुरुमा यो दोस्रो विश्व युद्ध मा एक शूटर थियो, तर अन्ततः परिवर्तन गर्न निर्देशन थाले - वर्तमान काल मा संघर्ष गरेर आविष्कार आधुनिक युद्धमा अघि, हाल विगतमा मा द्वन्द्व देखि, र पनि टाढा भविष्यमा युद्ध अघि।
खेल एक छवि कसरी माउन्ट? खेल को छवि लागि कार्यक्रम। पीसी खेल
खेल Robocraft: विमान कसरी बनाउने?
"वर्ण भेट्टाउन सकिँदैन" (वाह): कहाँ यसलाई फेला पार्न
चिहान RAIDER Underworld। पहिलो भाग को खण्ड
खेल लागि छ nvidia नियन्त्रण प्यानल सेटिङ: विवरण
"Dota 2" लबी लागि आदेशहरू: कोड, Cheats र सुविधाहरू खण्डमा
"Neosmectin" हो। प्रयोगको लागि निर्देशन
को त्रिकोण (टाटु) पुरातन र आधुनिक संसारमा को मूल्य
ठोस इन्धन बयलर लागि तीन-तरिका वाल्व: सञ्चालन
रङ्ग: सुक्खा, सामान्य, तेल छाला (चटाई क्रीम) को लागि
ड्रागन नाइट: कहानी को एक सिंहावलोकन, को गेमप्लेको, प्रणाली को भूमिकाको र लड को प्रकारका।
"शीत गणना": अभिनेता र चलचित्र सुविधाहरू
बेलारुस बच्चाहरु बारेमा सबैभन्दा रोचक तथ्य
रूस (सूची) को ज्ञात राजनीतिक तथ्याङ्कले
संसारको सबैभन्दा बेकारी कुरा: केही रोचक उदाहरण
चिकित्सकहरु भेनस - "HELLAS प्रबल प्रेम सिर्जना"
दिमित्री Yurtaev: जीवनी र काम
Sensations र धारणा को शारीरिक आधार